SAWIRRO: RW Kheyre oo kormeer ku tagay ilaha dhaqaalaha dalka. – Wakaaladda Wararka Hiilnews
By admin on 20/10/2018 No Comment
Sabti, October, 20, 2018(HNN) Ra’iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xassan Cali Kheyre oo ay weheliyaan xubno ka tirsan golihiisa wasiirada ayaa maanta kormeer ku tagay dekedda Muqdisho iyo wasaaradda maaliyadda Soomaaliya.
Ku simaha wasiirka maaliyadda ahna wasiiru dowlaha wasaaradda naaliyadda Maxamuud Xayir Ibraahim ayaa ra’iisul wasaaraha ku soo dhaweeyay xarunta , isagoo uga warbixiyay horumaradii ugu dambeeyay ee laga gaaray dakhli uruurinta iyo dardar-gelinta hawlaha dib-u-habaynta dhaqaalaha.
Xassan Cali Kheyre ayaa sidoo kale kormeeray dekedda magaalada Muqdisho,isagoo kormeeray xafiisyada kala duwan ee dekadda Muqdisho, waxana kulan uu la qaatay maamulka sare ee dekadda iyo taliska booliiska oo uu kala hadlay xoojinta dagaalka ka dhanka ah musuq-maasuqa.
SAWIRRO: RW Kheyre oo kormeer ku tagay ilaha dhaqaalaha dalka. added by admin on 20/10/2018